Dhegaha xarig la’aanta ah ee Apple AirPods oo la xaqiijiyay inay sababaan cudurka halista ah ee KANSARKA ah (Daraasad cusub) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Dhegaha xarig la’aanta ah ee Apple AirPods oo la xaqiijiyay inay sababaan...
Dhegaha xarig la’aanta ah ee Apple AirPods oo la xaqiijiyay inay sababaan cudurka halista ah ee KANSARKA ah (Daraasad cusub)
()19 Nof 2019 – Dhega gashiga Apple AirPods ayaa la sheegay inuu sababi karo cudurka halista ah ee Kansarka, sida ay isku raaceen culumo caafimaad oo gaaraysa 250 xeeldheere.
Apple AirPods wuxuu ka mid yahay agabyada haatan loogu iibsi badan yahay caalamka. 250 saynisyahan oo kasoo kala jeeda 40 dal oo caalamka ah ayaa barwo digniin ah u diray hay’adda QM ugu qaybsan caafimaadka ee WHO.
Marka la eego daraasadda ay sameeyeen culumadani, waxay isku raaceen in aaladda Apple AirPods ay qofka “u baylihinayso halista kansarka“.
Waxaa sababta lagu sheegay Pods-ka oo leh kaahfalka hir-baacyada raadiyaha, kaasoo lagu adeegsado aaladaha leh WiFi-ga, sida internet-ka iyo Bluetooth.
Waxaa intaa dheer, in kanaalka dhegtu uu aad xasaasi u yahay oo uu markiiba baylah u noqon karo kaahfalladan halista ah.
Sharikadda Apple oo sanadkii tegey ee 2018 oo qura iibisey 28 milyan oo Air-Pods, 16 milyanna iibisey 2017, ayaa garowsatey inay agabyadani halis ku yihiin caafimaadka dadwaynaha, yeelkeede, waxay weli ka caga jiidayaan inay suuqa ka saaraan oo biddaalkooda baadi doonaan.
Previous articleDowladda Norway oo deeq ay siin jirtey ka goosatay Masjidka Towfiiq ee lagu dirirsan yahay (Warbixin)
Next articleDAAWO: ”Waa taangiga ugu casrisan!” – Ruushka oo soo saaray taangi ay Galbeedku ka cabsadeen + Sawirro